သင့်ကိုသင် မေးဖို့ မေးခွန်း ၁၀၀? | Ta Pwint Pan
သင့်ကိုသင် မေးဖို့ မေးခွန်း ၁၀၀?
၅၇။ သငက် သူတပါးကို အကြံပေးရန် ဝါသနာပါသလော
တချို့မေးခွန်းကို ဟုတ်ကဲ့-ဟူ၍၄င်း၊ တချို့မေးခွန်းကို ဟင့်အင်ဒ-ဟူ၍၄င်း၊ ဖြေဆိုရပေလိမ့်မည်။ မည်သည့်အဖြေသည် လိုလားဖွယ်ဖြစ်သည်ကိုလည်း သင်သိရှိထားရပေမည်။ လိုလားဖွယ်၊ အကျိုးရှိဖွယ်ကို သင်ခွဲခြားနိုင်ပေမည်။ ဤမေးခွန်းများကို ဟုတ်တိုင်းမှန်ရာ ဖြေကြည့်ပြီးသောအခါ အော်—ငါ့မှာ ဘာတွေ ချွတ်ယွင်းနေပါကလား၊ ဘယ်နေရာမှာ ပြည့်စုံပြီး၊ ဘယ်နေရာမှာ ချို့တဲ့နေပါကလား၊ ငါ ဘယ်လောက်ပြုပြင် ဖြည့်ဆည်းဖို့ လိုနေပါသေးသလဲ-ဟု ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း သိမြင်လာမည် ဖြစ်ပေသည်။
မှတဆင့်ဖော်ပြပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။မူရင်းရေးသားသူနှင့်တဆင့်ဖော်ပြခွင့်ရရှိအောင် ဆောင်ရွက်ပေးသူများအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။
Ideal Marriage(စံပြုထိုက်တဲ့အိမ်ထောင်ရေး) →